Dhagax cad - alaabta xiddiga ee gurigaaga | Bezzia
Susana godoy | 13/01/2022 14:00 | Guriga
Ma garanaysaa dhagaxa cad? Hubaal waad maqashay, sababtoo ah waxay lama huraan u tahay gurigeenna. Laakiin xitaa haddaadan rumaysan, markaad ogaato dhammaan faa'iidooyinka, waad u bixi doontaa haddii aadan hore u haysan. Mararka qaarkood waa run inaan u raadinno alaabo gaar ah oog kasta. Laakiin, maxaad u malaynaysaa inaad wax walba ku haysato?
Waa wax taas Waxay nagu badbaadin lahayd labadaba guriga iyo goobta dhaqaalaha. Haddaba, waxaan hadda bilaabi karnaa inaan ogaano dhammaan faa'iidooyinka uu leeyahay dhagaxa cad iyo sida loogu faa'iidaysan karo faa'iidada ugu badan. Waxaan kuu sheegaynaa wax walba si aadan u lumin faahfaahinta!
1 Maxaa lagu nadiifin karaa dhagaxa cad
2 Sida dhagax cad loo isticmaalo
3 Maxay ka samaysan tahay alaabtan nadiifinta?
4 Faa'iidooyinka weyn ee dhagaxa
Maxaa lagu nadiifin karaa dhagaxa cad
Halkan waxaan ku dhawaad, ku dhawaad ​​inaan is weydiinno su'aasha ka soo horjeeda: Waa maxay waxa aan lagu nadiifin karin dhagax cad? Sababtoo ah runtu waxay tahay marka aan ka fekereyno nadiifinta gurigeena, nooca alaabta dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa inta badan sagxadaha. Sidaa darteed, balaastikada iyo dhaldhalaalka ama birta aan la isku dhejin labadaba waa lagu nadiifin karaa. Laakiin sidoo kale waa, Waxay ku fiicnaan doontaa lacagta, naxaasta iyo xitaa crystals. Intaa waxaa dheer, jikada waxaan ku nadiifin karnaa labadaba saxanka iyo saxarada dhoobada iyo marmar ama granite.. Waxa kale oo ay ku fiican tahay musqulaha iyo qasabadaha, iyo sidoo kale in laga saaro wasakhda miridhku. Markaa ha ka baqin inaad isticmaasho, gaar ahaan meelaha ay nadiifinta aasaasiga ahi iska caabin karto.
Sida dhagax cad loo isticmaalo
Waa run in ay jiri doonaan doorashooyin dhowr ah, laakiin qaar ka mid ah kuwa aasaasiga ah ayaa badanaa la yimaada isbuunyo si ay u fududeeyaan nadiifinta. Waa inaan qoysnaa isbuunyadan oo aan si fiican u daadino. Dabadeed, waxaanu dhex mari doonaa dhagaxa cad ka dibna korkiisa si loo daweeyo. Sida caadiga ah, lagama maarmaan ma noqon doonto in aad xoqdo. Markaad si fiican u miirtay dusha sare, ka saar maro qoyan ilaa inta aysan jirin wax nasasho ah oo ka mid ah alaabta. Si aad u hesho dhalaalka lagama maarmaanka ah, qaado maro nadiif ah oo qalalan, si aad mar kale u gudubto meeshii aan ku nadiifinnay. Waxaad arki doontaa sida ay u egtahay dhalaal iyo adigoon samaynin dadaal weyn sidaan soo sheegnay. Sidoo kale, xusuusnow inaadan u baahnayn badeeco badan si aad u aragto natiijooyinka ugu fiican. Qadar yar oo keliya ayaa aad ku heli doontaa. Tani waxay ka dhigaysaa inay sii jirto wax ka badan intaad malaynayso.
Maxay ka samaysan tahay alaabtan nadiifinta?
Waxaan ka hadalnaa dhagaxa sida ku dhawaad ​​wax mucjiso ah. Sidaa darteed, waxaan had iyo jeer u malayn karnaa in ka mid ah maaddooyinka ay ka kooban tahay nooc ka mid ah walxaha, aynu nidhaahno gaar ah, oo waxba kama foga runta. Sababtoo ah haddii aad rabto inaad ogaato waxa uu ka kooban yahay, waan kuu sheegi doonaa taas dhexdeeda waxaad ka heli doontaa dhoobo cad iyo sidoo kale saabuun iyo biyo, iyada oo loo marayo glycerin khudradda iyo sodium carbonate. Uma baahnid wax kale oo aad guriga nooga tagto wax ka badan nadiif ah. Sidoo kale waa bakteeriyada, sidaa darteed nadiifintu xitaa aad bay uga sii xeel dheer tahay intii aan malayn karno. Ma laha nooc kasta oo walxo sun ah, sidaas darteed ma xanaajin doonto maqaarka sidoo kale.
Faa'iidooyinka weyn ee dhagaxa
Si aan laga maarmi karin ayaanu in yar u xusnay. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ayaa ah inaan ku nadiifin karno dhammaan sagxadaha gurigeena. Ma xoqin ama ka tagin wasakhda haddii aan si fiican u biyo raacinno Iyo sidoo kale in dhalaalku u muuqan doono ku dhawaad ​​sixir. Way sii dheeraanaysaa qiimihiisuna aad buu u hooseeyaa dhammaan faa'iidooyinka ay inoo diyaarisay. Aad bay ugu hufan tahay wasakhda ugu adag, taasoo ka dhigaysa gurigaaga mid nadiif ah muddo dheer. Intaa waxaa dheer, qaarkood waxay leeyihiin udgoon liin ah oo ka buuxin doona gurigaaga dareenkaas nadiifka ah. Ma isku dayday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Dhagaxa cad: Alaabta xiddiga ee gurigaaga
Waa maxay surimi maxaase ka samaysan?